Accueil > Gazetin'ny nosy > Ho any an-dafy Rajoelina : Terena ankolaka ireo Malagasy any hanotrona azy
Ho any an-dafy Rajoelina : Terena ankolaka ireo Malagasy any hanotrona azy
Hanao fitsidihana aar-pomba ofisialy any Frantsa ny filohampirenena Malagasy Rajoelina ny faha-28 May ho avy izao ka hatramin’ny faha-3 jona.
Amin’ny maha-fitsidihana ara-pomba ofisialy azy moa dia liana ny hahafantatra ny tena fandaharam-potoany any ny mpanara-baovao maro, ka ny fantatra aloha dia hisy ny ho fihaonany amin’ireo mpandraharaha ara-toekarena frantsay miara-dia ao amin’ilay vovonana antsoina hoe “Medef” ny marainan’ny faha-28 may.
Minisitra maromaro ao amin’ny governemanta Ntsay Christian no fantatra fa hiara-dia aminy any amin’izao fitsidihana ara-pomba ofisialy izao, dia ny minisitra ny Raharaham-bahiny, Naina Andriatsitohaina, ny minisitra ny Angovo, Vonjy Andriamanga, ny minisitra ny Fizahantany sy ny Fitaterana, Joël Randriamandranto, ny minisitra ny Indostria sy ny varotra, Lantosoa Rakotomalala ary ny minisitra ny Kolotsaina sy ny serasera, Rakotondrazafy Lalatiana. Tsy tazana ao anatin’ny delegasiona koa ny minisitra ny Vola sy ny toekarena Richard Randriamandranto, ka manitikitika ny sain’ny maro ny antony, nefa fitsidihana ara-pomba ofisialy izay tokony hifototra bebe kokoa amin’ny tontolo ara-toekarena.
Noho izany dia fantatra fa ny fiaraha-miasan’i Madagasikara amin-dry zareo Frantsay amin’ny lafiny angovo, fizahantany, fotodrafitrasa toy ny lalana, ny fanodinana sakafo no tena hifantohan’ny resaka hifanaovan’ny filoha Rajoelina sy ireto minisitra miara-dia aminy amin’ireo mpandraharaha ara-toekarena frantsay ao anatin’ny Medef ireo.
Hisy koa ny ho fiaraha-misakafo hariva hiarahan’ireto solontenam-panjakana Malagasy amin’ireo mpampiasa vola frantsay miisa 20 eo, izay notsongaina tamin’ireo maro, ary handray anjara amin’izany koa ny roa amin’ireo minisitra frantsay mahakasika ny resaka hifanakalozana.
Voalazan’ny loharanom-baovao koa moa fa “ho fanomezana fahafaham-po ny filoha Malagasy amin’ny tontolon’ny fambolena dia hisy ny ho fitsidihany ny tsenam-bokatra mpamongady ao Rungis? Hataony hatramin’ny 2 ora maraina izany fitsidihana izany, hoy ihany ny loharanom-baovao, ka ny ho tanjon’ny filoha dia ny hahafahany mampiroborobo ny fanondranana voankazo sy anam-bazaha (légumes) avy eto Madagasikara.
Ny faha-29 may indray, andro faharoa, dia hisy ny fihaonan’ny filoha Malagasy manokana amin’ingahy Filoha Frantsay Emmanuel Macron, manomboka amin’ny telo ora tolakandro, ka fantatra fa ny tontolon’ny fiarovana ny sisin-tanin’i Madagasikara sy ny eny amin’ny fari-dranomasina Malagasy (sécurité maritime) sy ny fandriam-pahalemana anatiny, ka hifotoran’ny resaka fampitaovana ny mpitandro ny filaminana, no ho vontoatin’ny dinik’izy mirahalahy ao. Isan’ny ho voaresaka amin’io koa ny ho fiaraha-miasan’i Madagasikara sy i Frantsa amin’ny tontolon’ny fizahan-tany sy ny angovo.
Tsy voafaritra mazava kosa ny fihaonana ofisialy hataon’ny filoha Malagasy ny andro fahatelo, faha-30 May. Ny fantatra dia hanamarika ny vaninandro nahaterahany ny filoha Malagasy amin’io. Ny tolakandron’ny 31 May kosa no hiverina hifampidinika amin’ny tompon’andraikitra frantsay ao amin’ny masoivohom-panjakana Malagasy ao Parisy ny filoha Malagasy, alohan’ny hihaonany amin’ireo zanaka ampielezana (diaspora) Malagasy ny sabotsy.
Momba ity ho fihaonan’ny filoha Rajoelina amin’ny zanaka ampielezana Malagasy any Frantsa ity moa dia re fa efa nampita hafatra ho azy ireo ny tompon’andraikitra ao amin’ny masoivoho Malagasy any Frantsa, mba hilazan’ireo Malagasy any ny fahavononany handray anjara amin’ny fihaonana amin’ny filohampirenena, ka ampiarahana amin’izany ny fampahafantarana amin’ny antsipirihany ny mombamomba ny tsirairay amin’izy ireo. Ny mampanahiran-tsaina an’ireo Malagasy sasany any dia ny fisian’ny fanerena an-kolaka azy ireo hanotrona ny filoha Malagasy amin’izany fihaonana izany. Heverin’ireo teratany Malagasy any ho tsy dia fanao loatra izany nefa dia sahin’ny tompon’andraikitra Malagasy ny misisika amin’ilay tsy fanao.